Wararka Maanta: Talaado, Feb 26, 2013-Maamulka Boocame oo Sheegay in Deegaankooda ay ka Tallaabeen Kooxo ka tirsan Al-shabaab oo ku wajahnaa Galgala
Duqa degmada Boocame Axmed Xasan Shire Xayle oo xilligan magaalada Garoowe ku sugan, ayaa arintan ku sheegay waraysi uu shalay siiyey mid kamid ah warbaahinta maxalliga ah ee Puntland.
Mudane Xayle ayaa tilmaamay in dhulka miyiga ah ee degaanka Boocame hoos taga ay todobaadyadii lasoo dhaafay ka gudbeen kooxo ka tirsan Al-shabaab, balse isu soo ekeysiiyey jamaacada Tabliiqa, waa sida uu hadalka u dhigaye.
"Waa niman ka tirsan Al-shabaabka koonfur kasoo jabay, muddo ayey meesha marayeen, markaas tabliiq ahaan bay anaga nagu dhaafi jireen, kadibna markii aan ogaaney ayey naga go'een" duqa degmada Boocame ayaa yiri.
Mar la weydiiyey waxa uu ku cadeyn karo in dadka halkaas maray ay ka tirsan yihiin Alshabaab, wuxuu yiri: "isuma eka dadku waa dad gubtey oo aad garneysid inay koonfur kasoo jabeen, laakiin nimanka tabliiqa ahi waa dad nool, marka sidaasaan u garan karnaa"
Ugu danbeyntii wuxuu duqa degmada Boocame sheegay in ay arintan ku wargeliyeen madaxda sare ee maamulka Puntland, islamarkaana ay xiligan jiraan ciidamo halkaas loo geeyey si ay dhaqdhaqaaqa deegaanadaas ka jira ula socdaan.
Dowladda Puntland ayaa dhowr mar oo hore ka dhawaajisay in dhulka Buuraleyda ah ee ku hareeraysan degamda Galgala oo ay horay ugu sugnaayeen xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab, ay soo gareen saraakiil iyo dagaalyahanno kale oo ka tirsan Al-shabaab, kuwaasoo kasoo kicitimay dhianca koonfurta.
2/26/2013 12:35 PM EST